အမျိုးသမီးဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့တယ်. . . ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
သမီးတော်အဖြစ် အနှစ် ၂ဝ၊ မိဖုရားအဖြစ် ၁ရက်၊ တော်ဝင်မင်းသမီးအဖြစ် ၁ဝလ၊ အထိန်းတော်အဖြစ် တစ်သက်.. ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ မိန်းမအများစုဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
မိန်းမဟာ ကလေးငယ်ကိုပွေ့ချီထားပြီး နွားနို့ကျိုနေတယ်၊ အဝတ်လျှော်နေတယ်။ ဆပ်ပြာတွေပေနေတဲ့လက်နဲ့ နဖူးထက်ကချွေးတွေကို သုတ်ရင်း “အင်း.. အခုအချိန်မှာ ကလေးငယ်သေးတယ်၊ ကလေးကြီးလာရင် ငါလည်းအားလပ်ချိန်လေးတော့ရှိလာမှာပါ”လို့ တွေးတယ်။
ကလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလို့ မူကြိုတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ မိန်းမဟာ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ဈေးသွားတယ်၊ ချက်ပြုတ်တယ်၊ အလုပ်မှာလည်း မလစ်ဟင်းအောင်ကြိုးစားတယ်။ နေ့နေ့ညည အိမ်မှုကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ နေမင်း၊ ကြယ်နဲ့လတို့ကို သူမေ့သွားခဲ့တယ်။
ကိစ္စမရှိဘူး… ကလေးကျောင်းသွားတဲ့အခါ အားလပ်ချိန်တချို့ရှိလာနိုင်ပါတယ်… မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲပြောကြတယ်။ သူတို့မျက်နှာပေါ် အရစ်အကြောင်းရာတွေ တဖြည်းဖြည်းတွားတက်လာတာကို သူတို့ဥပေက္ခာပြုထားခဲ့မိကြတယ်။
ကလေးကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီ… မိန်းမဟာ ပိုအလုပ်များရတော့တယ်။
ကလေးကို လူတော်လူကောင်း ထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်။ မိန်းမဟာ အိမ်မှုကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စ၊ အလုပ်၊ သားရေးသမီးရေး၊ လင်ဝတ္တရား စတာတွေမှာ တဝဲဝဲလည်နေတော့တယ်။ သားသမီးနဲ့လင်ယောက်ျားက နဂါးငွေ့တန်းပါ၊ မိန်းမဟာ ဂြိုလ်ပါလို့ မိန်းမအများက ဒီလိုတွေးခဲ့ကြတယ်။
ငွေရောင်ဆံနွှယ်တချို့က မိန်းမရဲ့နွမ်းနယ်တဲ့နဖူးထက်ကနေ လေဟာနယ်ထဲလျောကျသွားခဲ့တယ်။
“ဘယ်အချိန်ခါမှများ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နဲ့ ငါခဏအနားရနိုင်မလဲ…”
လရောင်မရှိတဲ့ညနက်မှာ မိန်းမဟာ နာကျင်ညောင်းကိုက်နေတဲ့အကြောတွေကို အားစိုက်ဆွဲဆန့်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးတယ်။
အာ… တောင့်ခံလိုက်ပါဦး… ကလေးကြီးလာလို့ တက္ကသိုလ်တက်ချိန်ရောက်ရင် ဒါမှမဟုတ် သူတို့အလုပ်ရသွားတဲ့အခါ အရာအားလုံးကောင်းသွားမှာပါ၊ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ငါလည်း အားလပ်ချိန်ရှိလာမှာပါ။
မိန်းမက အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးတယ်။
အချိန်က မိန်းမရဲ့လှပမှုနဲ့အားအင်တွေကို စုပ်ယူသွားခဲ့တယ်။ မျက်နှာပေါ်ကအရစ်ကြောင်းနဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတုံ့နှေးခြင်းတွေကို တွင်းမည်းကြီးပမာ ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်။
ကလေးက အတောင်ပံစုံလင်ပြီး မိခင်အသိုက်ကနေ ခွာသွားခဲ့တယ်။ မိခင်ကိုအဖော်ပြုဖို့ အမွေးအတောင်ဟောင်းတချို့သာ ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်။
မိန်းမဟာ သက်ပြင်းချရင်း အခုမှ နားနားနေနေ နေဖို့အချိန်ရပြီလို့တွေးတယ်။
ဒါပေမယ့် နှမြောစရာကောင်းတာက သူ့သွားတွေ ချိနဲ့ကုန်ပြီ၊ မာတဲ့အစာတွေကို မဝါးနိုင်တော့ဘူး။
သူ့မျက်လုံးတွေ မွဲကုန်ပြီ လှပတဲ့အရောင်တွေကို မခွဲခြားတတ်တော့ဘူး။
သူရဲ့နားစည်တွေ မကြည်လင်တော့ဘူး။ သာယာနှာပျော်ဖွယ်တေးသံတွေကို မခံစားတတ်တော့ဘူး။
သူ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ တုံ့နှေးခဲ့ပြီ ဝေးဝေးလံလံ မသွားနိုင်တော့ဘူး။
ထွက်သွားတဲ့ကလေး ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးက သူ့ထက်ငယ်တဲ့ ကလေးသေးသေးလေးတစ်ယောက် ခေါ်ပြန်လာခဲ့တယ်။
အချိန်တွေ ပြန်ပြောင်းစီးဆင်းသွားပြန်ပြီလို့ မိန်းမထင်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကလေးရဲ့ကလေးအတွက် မိန်းမအလုပ်စများရတော့တယ်။ အဲဒီကလေးလေးက စကားစသင်နေပြီး သူ့ကိုခေါ်တာ “မေမေ” မဟုတ်ဘဲ “ဘွားဘွား” ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ မိန်းမဟာ ဘာအားလပ်ရက် အနားယူဖို့မှ မလိုအပ်ခဲ့တော့ဘူး။
နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှ ဟိုးအရင်အရင်အချိန်တုန်းက သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့ကတိကို သူပြန်သတိရလိုက်မိတယ်။ အဲဒီကတိက နွေဦးရာသီနေ့ရက်တစ်နေ့မှာ ပဝါအနီရောင်ကိုလွှမ်းခြုံပြီး မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတစ်နေရာမှာ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် နေပူစာခံမယ်၊ ကျောက်တုံးပေါ်တွားသွားတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့ခြေသံကို နားထောင်မယ်…..
အာ… အဲတာမှ တကယ့်ဇိမ်ခံအနားယူတာပဲ..
မိန်းမဟာ အဲဒီလိုတွေးရင်းတွေးရင်း ထာဝရအိပ်စက် အနားယူသွားခဲ့ပါတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက် ထာဝရအိပ်စက်အနားယူသွားတာကို ဒီလိုပုံဖော်ရေးသားရတာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်.. ခွင့်လွှတ်ပါ။
မိန်းမတော်တော်များများဟာ စိတ်သဘောထားကြီးစွာ တခြားသူအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးဆပ်နေချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့ သူတို့မေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူက သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။
မိန်းမတို့ရေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေဖျော်ဖို့ အချိန်နည်းနည်းလောက်၊ နေရာလပ်နည်းနည်းလောက် ချန်ထားပေးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့။ အချိန်မဆွဲပါနဲ့.. အချိန်ကိုမစောင့်ပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အခုအချိန်ကစ.. ဒီကနေ့ကစပြီး…. ပန်းကန်ထဲကအသားတွေကို ကလေးရဲ့ပါးစပ်ရှေ့ပဲရောက်အောင် မပို့ပါနဲ့တော့။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို အိမ်ပြင်ဖို့၊ ယောက်ျားဖို့ပဲ ချန်မထားပါနဲ့တော့။ ခွန်အားတွေအားလုံးကို အလုပ်ထဲမှာပဲ ထည့်မြှုပ်မထားပါနဲ့တော့။ အခါကြီးရက်မြတ်တွေမှာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့စာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်နာမည်ကိုမေ့မထားပါနဲ့တော့။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ်အိမ်သားကိုချစ်တဲ့နည်းတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အိုမင်းသွားခဲ့ရင် ရင်နာစရာ၊ နှမြောစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ…
(ဖတ်မိတဲ့စာတစ်ပုဒ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်..
နိုင်းနိုင်းစနေ (June. 21. 2015)